वेब स्क्रैपर लिंक चयनकर्ता Semalt द्वारा व्याख्या गरिएको
वेब सर्भरहरू वेबसाईटहरूमार्फत नेविगेट गर्न आवश्यक छ र सटीक जानकारी निर्दिष्ट गर्न चाहानुहुन्छ जुन उनीहरु हटाउन चाहन्छन्।. यो एक अत्यन्त प्रभावकारी अनलाइन प्रक्रिया हो, जसले यसको प्रयोगकर्तालाई बहु पृष्ठहरू निकाल्न विकल्प दिन्छ जसले जाभास्क्रिप्टको अजाक्स प्रयोग गर्दछ. प्रयोगकर्ताहरूले कुनै पनि उन्नत टेक्नोलिक कुञ्जीहरू प्रयोग गर्न बिना यो विशेष स्क्रैपिंग उपकरण धेरै सजिलै स्थापना गर्न सक्छन्. वेब स्क्रैरले उनीहरूलाई छिटो र सजिलैसँग आवश्यक सबै जानकारी एकत्र गर्न मद्दत गर्न सक्छ. यो सर्वोत्तम नि: शुल्क वेब स्क्रैपिंग क्रोम एक्सटेन्सन उपकरण हो, शुरुआती शुरुआती शुरुवातका लागि डिजाइन गरिएको छ जुन बिना एक पेशेवर सेवानिवृत्त वेबसाइट बाट डेटा निकाल्न चाहानुहुन्छ।.
विभिन्न डाटा स्क्रैपिंग वेब मार्फत (1 9)
प्रत्येक पल्ट वेब स्क्रेपर इन्टरनेटबाट नयाँ पृष्ठ खोल्दछ, प्रयोगकर्ताहरूलाई केही तत्व निकाल्न. एक योजना बनाउन पछि, प्रयोगकर्ताहरूले चयनकर्ताहरू विकास गर्नु पर्छ. तिनीहरू लक्षित वेबसाइटमा भएका तत्वहरू छन् जुन केहि डेटा समावेश गर्दछ. प्रयोगकर्ताहरूले प्यानल मार्फत चयनकर्ताहरू थप्न, सम्पादन वा मेटाउन सक्दछन्. प्रयोगकर्ताले यो स्क्रैपिंग उपकरण को विभिन्न प्रकारका डेटा, जस्तै सामग्री, तालिकाहरू, छविहरू, फोन नम्बरहरू, मूल्यहरू र थप जम्मा गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्. उनीहरूले आवश्यक जानकारी सङ्कलन गरेपछि प्रयोगकर्ताहरूले TSV क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि गर्न र तिनीहरूलाई फोल्डरहरूमा बचत गर्न सक्छन्, वा एक्सेल स्प्रेडसिटका रूपमा परिणामहरू Google कागजातमा निर्यात गर्न सक्छन्।.
बहुविध माध्यमहरू (नेभिगेसन) नेभिगेसन (1 9)
यो निष्कर्षण उपकरण प्रयोग गरी, वेब खोजीकर्ताले विभिन्न कोटिहरू र उपश्रेणीहरू बीच नेभिगेट गर्न सक्छन् र सजिलैसँग लिंक पाठहरू चयन गर्न सक्छन्।. उदाहरणका लागि, तिनीहरू दुई लिङ्क चयनकर्ता छनौट गर्न सक्छन्: एक मुख्य कोटिको लागि र उपश्रेणीका लागि अन्य. यस तरिकाले विभिन्न वेब पृष्ठहरू मार्फत नेभिगेट गर्न र URL हरु हटाउन सम्भव छ.
समाप्ति को संभालने को तरीका (1 9)
आज धेरै ई-पसल र खुदरा विक्रेताहरु लाई उनको वेबसाइटहरुमा धेरै श्रेणियां छ।. प्रयोगकर्ताहरूलाई कुन वर्गको प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ निर्णय गर्न आवश्यक छ. प्रत्येक समुहमा उत्पादहरूको सूची छ पृष्ठ समापन लिङ्क सहित. यसबाहेक, प्रयोगकर्ताहरूलाई याद गर्न आवश्यक छ कि केहि पृष्ठहरू जुन पृष्ठ समाप्ति पेजबाट मात्र छ र निश्चित निश्चित वर्गबाट ​​उपलब्ध छन्. तिनीहरू केवल एक साइटमैप (योजना) सिर्जना गरेर सुरु गर्न वस्तुहरू निकाल्नु पर्छ. यसो गर्न को लागी, पृष्ठ को लिङ्क छनौट गर्न को लागी उनि अन्य लिंक चयनकर्ता बनाउनु पर्छ. प्रयोगकर्ताहरूलाई सम्झना चाहिन्छ कि जब वेब स्क्रैपरले कुनै निश्चित श्रेणी खोल्छ, यो केवल यस विशिष्ट पृष्ठबाट वस्तुहरू सङ्कलन गर्न सक्दछ. त्यसोभए, यसले विभिन्न सम्मिश्रण लिंकहरूको प्रयोग गर्न सक्छ. यी लिङ्कहरूले थप सम्बन्धित डेटा पत्ता लगाउन सक्छन्, साथसाथै प्रयोगकर्ताहरूको लागि अधिक अंक लगाउने लिङ्कहरू.
यो निकाल्ने उपकरणमा केहि उत्कृष्ट सुविधाहरू छन्, र यसले वेब खोजीकर्ताहरूलाई उनीहरूले चाहने परिणामहरू इकट्ठा गर्न मद्दत गर्न सक्छन्, तिनीहरूलाई पछिको विश्लेषण गर्न सक्छ।. यो एक सरल उपकरण हो जुन कुनै कोडिङ चाहिन्छ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उन्नत कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग कुञ्जीहरू आवश्यक पर्दैन. यो सर्वोत्तम नि: शुल्क वेब हो जुन क्रोम एक्सटेन्सनको लागि क्रोम एक्सटेन्सन छ जुन वेब स्क्रेपर पेशेवर भर्ती बिना वेबसाइट बाट डेटा निकाल्न चाहानुहुन्छ।. तिनीहरूले यसलाई स्थापना गर्नका लागि केवल Google क्रोम ब्राउजर प्रयोग गर्नु पर्छ Source .